shp - Peeji nke 4 - Geofumadas
... KML OGC format dakọtara ma ọ bụ ihe egwuregwu?
Akụkọ dị n'ebe ahụ, ọ bụ ezie na ọ karịrị otu afọ gara aga ka e lebara usoro kml anya dị ka ọkọlọtọ ... oge a kwadoro ya na-eweta ọtụtụ nkatọ banyere ebumnuche Google iji chekwaa usoro nke edoziri nke ọma. Ugbu a ka ekwuru na kml dị na ...
Na ọkwa weebụ, enwere ọtụtụ ngwa ọrụ map, ma na desktọọpụ dị ka Google Earth enweghị ọtụtụ. Ọ bụ ihe ijuanya na ESRI ewepụghị mbọ ya iji wepụta ihe ga-edebe ya n'ime ngwaọrụ GIS naanị, ọ mekwara ya site na iburu ArcGIS Explorer, nke…
Ọtụtụ mgbe ndị mmadụ na-achọ ihe eserese nke obodo ha, ụlọ ọrụ ndị metụtara njikwa mpaghara, ma ọ bụ na mgbasa ozi, nchekwa ma ọ bụ ọkwa na-ewuli elu, na-enwekarị ebe ha na-ekerịta data ha. N'okwu a, m ga-ekwu maka Honduras, n'ihi na Google Analytics na-ekwu na enwere ndị Hondurans na-eme nchọgharị na saịtị a maka ebumnuche ndị a, yana n'ihi na ha na-akpakọrịta ...
Google Earth ga eme ka DTM gi di nma ma karia ...
Google na-ebido mkpọsa na ịchọta data ndị ọzọ, orthophotos, ụdị dijitalụ nke ala, ụdị 3D nke ụlọ ... nke a nwere ike ịgbanwe echiche nke data Google Earth abaghị uru maka ọrụ siri ike. Eziokwu ahụ bụ na Google na-esote data a abụghị naanị asọmpi megide Virtual Eath, kama data ...
Ihe APN 32 Na-enweta Maapụ
Programaweb nwere ọmarịcha nchịkọta nke ozi, ahaziri ma debe aha ya n'ụzọ dị mkpa. N'ime ha, ọ na-egosi anyị API dị na isiokwu eserese ruo taa bụ 32 Nke a bụ ndepụta nke 32 API dị na weebụ, otu ụzọ iji tụọ ha bụ ewu ewu ha site na ...
Otu esi etinye mgbasa ozi na map
Ọ dịwo ogologo oge ebe mgbasa ozi n'ịntanetị nwere ike ido onwe ya, tumadi site na ire njikọ ma ọ bụ site na mgbasa ozi gburugburu nke Google Adsense bụ onye ndu. Ruo na otutu ndi mmadu adighi-ewe iwe ozo site na ihu mgbasa ozi na ibe ha na-agabiga, karia ma ha tinye uru bara uru ...
Geospatial - GIS, Nkwado Blog
Agbanyeghị na enwere ike ịme ihe ndị a niile na ngwa dịka Manifold, ma ọ bụ ArcGis naanị site na imeghe kml na mbupụ ya na usoro ọchụchọ, ọchụchọ Google maka kml ka dxf bụ ụba. Ka anyị hụ ụfọdụ atụmatụ nke nwa akwụkwọ na Mahadum Arizona na-enye n'efu iji tọghata data Google Earth na usoro ...
Ngwa Ntanetị Ejiri Na Mpaghara (1)
Mgbe map Google weputara API ya, otutu abụrụla ngwa emere iji jikọta geolocation na ozi intaneti karia kwa ubochi n'okpuru ihe omuma web 2.0. N'ezie, Google Earth na map Google gbanwere ụzọ ịhụ ụwa nke zuru ụwa ọnụ na ịntanetị, iji hụ ya ...
Google Earth / Maps, Internet na Blogs